News Collection: यौन जिज्ञासा र समाधान
म एक सन्तानकी आमा हुँ । लगभग दुई वर्ष भयो, मैले आफ्नो श्रीमान्सँग यौनसम्पर्क नराखेको । अर्को एक पुरुषसँग माया बसेकाले दुवै जनाको सहमतिमा करिब १५ महिना लगातार यौन सम्पर्क राख्यौं र दुई महिनापहिले ऊ पनि वैदेशिक रोजगारीमा गयो । त्यसयता मैले कसैसँग सम्पर्क राखे की छैन । हुनत म जोसँग पनि सम्बन्ध बनाउने महिला होइन, तर पनि आफ्नो श्रीमानबाहेक माया-प्रेम बस्न गएकाले त्यस्तो सम्बन्ध भएको हो । यी सबै कुराको निचोड र मेरो मनको खुल्दुली के हो भने अब एक-दुई महिनाभित्रै मेरा श्रीमान् घर आउँदै हुनुहुन्छ । मैले अरू कसैसँग यौनसम्पर्क राखे- नराखेको उहाँलाई थाहा हुन्छ ? थाहा हुन्छ भने कसरी ? थाहा हुँदैन भने कसरी ? के यस्तो कुरा थाहा पाउने कुनै उपाय छ ? के महिलाले आफ्नो यौनचाहना दबाएर राख्नुपर्छ ? गोप्य तरिकाले सम्बन्ध राख्न पाइँदैन ? यो अधिकार महिलालाई छ कि छैन ?
शाब्दिक अर्थ नै खोज्ने हो भने विवाहेत्तर सम्बन्धले विवाहबाहिरको कुनै पनि सम्बन्धलाई बुझाउनुपर्ने हो, तर विवाह गरिसकेपछि जोडीमध्ये कुनै एकले अर्को श्रीमान् वा श्रीमतीबाहेकका व्यक्तिसँग राजीखुसी यौनसम्पर्क राख्नुलाई बुझाउँछ । कतिपयले यसले विवाहभन्दा बाहिरको यौनसम्पर्कलाई मात्र जनाउने बताएका छन् भने कतिपयले यसलाई वैवाहिक सम्बन्धभित्रकै यौन धोका भन्छन् । विवाह गर्ने पद्धतिको संस्थागत विकास हुनुभन्दा पहिले विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध हुने कुरै भएन, तर यसको विकास हुन थालेदेखि नै विवाहेत्तर सम्बन्धको समस्या रहँदै आएको छ । देहव्यापारीसँगको सम्बन्ध, देहव्यापारीले राख्ने सम्बन्ध, बलात्कार, विवाह नगरी साथै बस्ने जस्ता कुरा पनि विवाहेत्तर सम्बन्ध हुन्, तर धेरैजसो स्थितिमा श्रीमान्भन्दा बाहिरको व्यक्तिसँग प्रणयपूर्ण सम्बन्धलाई लिइएको पनि देखिएको छ । विवाहेत्तर सम्बन्ध भावनात्मक मात्र पनि हुनसक्छ र शारीरिक मात्र पनि । सामाजमा धेरैजसो चासो शारीरिक सम्बन्धमा गएको देखिन्छ ।
समाजमा यस्तो सम्बन्ध कति व्यापक छ भन्न सजिलो छैन । किन्सेले अध्ययन गर्दा सुरुमा यस्तै ३० प्रतिशतले आफूले विश्वासघात गरेको बताएका थिए भने गहन रूपमा खोजतलास गर्दा थप ३० प्रतिशतले विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध रहेको कुरा स्वीकार गरेका थिए । यसले के संकेत गर्छ भने विवाहबाहिर सम्बन्ध हुने भए पनि उनीहरू त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन् । एक अध्ययनमा, मध्य तथा उच्च आय भएका ५०-६० प्रतिशत पुरुष तथा ४०-५० प्रतिशत महिलाको बाहिर सम्बन्ध हुने देखिएको छ ।
परपुरुषसँग सम्बन्ध किन ?
सामान्यतः श्रीमान्बाहेक अन्य पुरुषसँगको सम्बन्ध त्यो पनि विशेष गरेर यौनसम्बन्धलाई नै हामीले पर-पुरुषसँगको सम्बन्ध भन्छौं, तर गहन रूपमा हेर्ने हो भने को आफन्त र को परपुरुष भन्न गार्‍हो हुन्छ, त्यसैले कसलाई 'पर' पुरुष भनेर परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा एकरूपता नहुन सक्छ । मायाप्रीति बसेको व्यक्ति एक किसिमले आफन्त नै हुन्छ । कतिपय स्थितिमा श्रीमान् र आफूले जन्माएका सन्तानसँगको मायाभन्दा पनि प्रगाढ माया त्यो व्यक्तिसँग हुनसक्छ ।
वंशजको निरन्तरताका लागि पुरुष र महिलाको जोडी एकैसाथ बस्नुपर्ने आवश्यकताले होला, समाजमा विवाह गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने पद्धतिको विकास भयो । समाजमा विवाहभन्दा बाहिरको सम्बन्धलाई निरुत्साहित गर्न अनेक बन्देज लगाइएको छ । त्यसमा पनि महिलाको सन्दर्भमा यो बन्देज अझ कडा किसिमको छ । समाजमा त्यसका विरुद्ध मूल्य-मान्यता नै विकास भएको छ । यस किसिमको कडा सामाजिक बन्देज हुँदाहुँदै पनि श्रीमान्बाहेकका व्यक्तिसँग अर्थात् विवाहेत्तर सम्पर्क किन राखिन्छ भन्ने कुराको जवाफ सजिलो छैन ।
विवाहका क्रममा वाचा गरे पनि विभिन्न कारणले एक-अर्कामा सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुन गार्‍हो छ । आकस्मिक दुर्घटना वा सांयोगिक घटनाका कारणले विवाहेत्तर यौनसम्बन्ध हुनुभन्दा प्रणयपूर्ण सम्बन्धसहितको विवाहेत्तर यौनसम्पर्कले दम्पतीको सम्बन्धमा अनेकन समस्या ल्याउँछ । विवाहेत्तर सम्बन्धको कारण केलाउँदै जाँदा सायद बलियो र सक्षम 'जिन' वा वंशाणुलाई सन्तानमा सार्ने जैविक वा प्राकृतिक आवश्यकताका कारणले यसो भएको हुन सक्छ, तर कतिपय स्थितिमा विवाहेत्तर सम्बन्ध आफैंमा समस्या नभएर अन्तरनिहित समस्याको एक लक्षण मात्र हुनसक्छ ।
व्यक्तिअनुसार यौनचाहना फरक-फरक हुन्छ, तर सबैले आफूले अपेक्षा गरेअनुरूपको यौनचाहना पूरा गर्न वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न चाहन्छन् । वैवाहिक सम्बन्धभित्रका यौनसम्बन्धले आफ्ना यौनचाहना पूरा हुने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा यसै भन्न सकिँदैन । असन्तुष्टिका साथ बाँच्नुपरेका स्थितिमा विवाहभन्दा बाहिर यौनचाहना पूरा गर्ने उपाय खोज्नु अस्वाभाविक होइन, तर सुखमय वैवाहिक जीवन हुँदैमा विवाहभन्दा बाहिरको सम्बन्ध हुँदै नहुने भन्ने पनि होइन ।
एउटै व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा सन्तोष प्राप्त गर्न नसक्नु, सम्बन्ध प्रेममय रहन नसक्नु, प्रेमयुक्त सम्बन्धमा बाँधिन चाहनु, भावनात्मक प्रगाढतामा बाँच्न चाहनुजस्ता कुराले कुनै नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रेरित गरिरहेको हुनसक्छ । दम्पतीबीच एक-अर्काको भावनालाई सम्मान नगर्नु, बेवास्ता गरिएको अनुभूति हुनु, यौन नैराश्यताले ग्रसित हुनु, उनीहरूमाझ साथै बस्ने चाहना नहुनु, भावनात्मक अन्तरङ्ग सम्बन्ध नहुनुजस्ता कुराले वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने कर्मतर्फ डोर्‍याउँछ । सामान्यतः गहिरो वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिका लागि भावनात्मक सम्बन्ध छुटिसकेपछि मात्र अर्को विकल्प हेर्ने क्रममा विवाहेत्तर सम्बन्ध स्थापित हुनपुग्छ । आफंैले रोजेर विवाह नगरिएको स्थितिमा गहिरो भावनात्मक प्रेममय सम्बन्धको विकास नै नभएको हुनसक्छ । यी कुरालाई लैङ्गकि असमानताले थप बल्झाएको हुन्छ । तपाईंको सन्दर्भका भौगिलिक दूरीका कारण अर्को व्यक्तिसँग शारीरिक मात्र होइन, भावनात्मक सामीप्यता पनि अघि बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
-यो प्रश्नको उत्तर आगामी अंकमा पनि जारी रहनेछ ।)